Inokurumidza Kukura Blog paPuraneti? | Martech Zone
China, December 7, 2006 NeChishanu, Gumiguru 24, 2014 Douglas Karr
Rinopfuura gore rapfuura (2005) ndakafunga kuti ndaifanira kumisikidza zvinangwa zvehunyanzvi. Akafuridzirwa nevanhu vakaita saSeth Godin, Malcolm Gladwell, Robert Scoble naShel Israel, ndinopinda kublogi, pasocial network, yekutsvagisa injini, uye analytics pamwe neese matekinoroji epasi akavamhanyisa. Iyo yanga isiri rocket sainzi, asi yanga iri nguva inoshamisa muhupenyu hwangu. Ndakaona kuti chii chishuwo changu, uye ndakavaka kuvimba kwakanyanya mumano angu.
Sezvechangobva kuitika, ini ndakapfuura vamwe veavo mabloggi vakandidzidzisa. Izvo zvinofanirwa kuve kwekupedzisira kurumbidza kune vanhu ava (ndinovimba vanozvitora nenzira iyo!). Nemablogiki makumi mashanu nemashanu ezviuru achiteverwa kuburikidza neTechnorati, ndiri kukurumidza kukurumidza uye kusvika padanho re55,000,000 kana kudaro. Ndiko kukura kwakanaka uye kunofanirwa kutora kumwe kutarisa muindastiri. Ini handisati ndiri muTop 35,000, uye handina kuwana chero mibairo yeBlogging… asi kushanda nesimba uye ruzivo rwezvinhu zvangu zvabhadhara. Izvi kunyangwe paine kurwa kwakawanda kwazvo pamusoro pangu:
Ini handina 'zvemukati' ruzivo muindasitiri
Handina maindasitiri ekubatana
Ini handigare muSilicon Valley (ndinogara kuIndiana!)
Ini handina kunyora bhuku (zvakadaro!)
Ini ndinoshanda zvese renguva yakazara basa uye padivi mabasa
Mamwe mabhenefiti andakave nawo:
Ndine yangu yekugamuchira saka kuisa yangu saiti uye kuichengeta icho chidimbu chekeke.
Ini ndinogona kuronga. WordPress ipuratifomu inoshamisa yekublogi, asi ini ndaifanira 'tweak' madingindira angu neavo vevatengi vangu kuti ndigadzirise iwo ekushandisa uye nekutsvagisa injini.
Nezvo izvo mupfungwa, ndinofunga anotevera manhamba akanaka akanaka uye kutaura kune rakaoma basa randave ndichiita. Heino runyorwa rweMusoro 100 mablogiki kana anonyatso kuzivikanwa mabloggi uye avo 3-mwedzi kukura (Alexa.com). Ichokwadi, ndine nzira refu yekufamba ndisati ndatsvagisa muzvikamu zvepamusoro zveblogosphere - asi izvi zvichiri kupa humbowo hwekuti zvirimo uye kuraira kweblog rangu kwakabatsira uye kwakanangidzirwa.
Ndakaita sei kufambira mberi uku? Iwe uchafanirwa kuita zvishoma kuverenga pano, asi ini handina kudzosa chero zvakavanzika. Izvo zvese zviri pano mune ino blog ... izvo zviedzo, mhedzisiro, zvese! Zvichida nhau dzinonakidza dzekunonoka kugovana ruzivo urwu nevamwe vatsva mabloggi. Ndiri kubvunza vashoma izvozvi uye ndichivabatsira. Ini ndinotarisira zuva iro ma stats avo anopfuura yangu (ndinovimba mushure mekunge ndiri muTop 100!).
Kutenda nekuverenga! Ndatenda nekupindura! Thanks nekudzoka! Kana paine dzimwe nyaya dzaungade kuti nditaure nezvadzo, ndapota sununguka. Ini handina kumbobvira ndapererwa neruzivo kubloga nezvazvo - asi ini ndaizoda mukana wekutsvagisa musoro wenyaya wesarudzo yako.
Ndinoziva kuti handisi iro rinokurumidza kukura bhurogu papasi… asi basa rangu rakaoma is kubhadhara. Ramba uchidzoka, ini ndicharamba ndichigovana newe!
Tags: blogging kukurakukura blog yakokukuramalcolm mufarowellrobert scobleseth godinShel IsraeritechnoratiWordPress
Google Mepu ikozvino neKML Tsigiro
Zvita 7, 2006 na9: 40 PM
Hei Doug, makorokoto pakukura kwako. Ndinofunga isu tiri mumhanyi-mujaho newe. Yakatanga zvakare rinopfuura gore rapfuura…
Zvita 7, 2006 na10: 53 PM
Kutenda, Scott! Uye ndinokukwazisai nemiwo vanhu! Chinhu chimwe chete chandinofarira nezvemujaho uyu ndechekuti chero munhu anogona kuhwina uye kune yakawanda nzvimbo ye 'vanokunda'!
Dec 8, 2006 pa 12: 47 AM
Basa rakakura Doug. Ndakanyorerwa kubhurogu yako kwemwedzi mishoma yapfuura, uye kusvika zvino ndanyatsofarira zvandakaona. Sa blogger ndichangotanga kubuda (uye nezvose zvakafanana zvirovedzo zvinondirwisa), Ndinoziva kuoma kwazvinogona kuita kukwevera muvaverengi vatsva paunenge uchangotanga. Chengetedza iro rakakura basa!
Dec 8, 2006 pa 6: 36 AM
Kutenda nekuve wangu technical backbone uye shamwari. Ndinovimba ndinogona kukuitira (iwe) iwe zvawakaitira "vako varairidzi" - Pfuura iwe !! Haha !! Handina kumbogara kwenguva yakareba zvakakwana kuti ndive neavhareji yemwedzi mitatu, asi zvinoita sekunge ndiri kufamba zvakanaka… ndinokutendai.
Traffic Rank ye patcoyle.net:
Nhasi 1 wk. Avg. 3 mos. Avg. 3 mos. Chinja
Sezvo ini ndisiri wekutanga kutaura, ini handisi kutumira pano CHETE kuti uwane traffic kudzokera kublog rangu futi.
Zvita 8, 2006 na4: 39 PM
Ndiwo mashoko emutsa. Ndinozvikoshesa chaizvo. Ini handidi hangu kudaidzira kukura kweblog rangu - asi dzimwe nguva kana usina zita kana mukurumbira, unofanirwa kurega vanhu vazive kuti iwe uchiri kukodzera kutariswa navo.
Nguva yekupedzisira ini yandakatumira nezve kukura uye kubudirira kweblog rangu, yakawedzera kusvika zvakanyanya. (http://www.dknewmedia.com/2006/09/03/my-blog-is-better-than-9986-of-all-other-blogs/)
Ini ndinoshamisika kuti chii icho chinotaura nezvedu sevaverengi? Ini ndinonyorera kublog raJohnathon Chow izvozvi mushure mekuverenga mabudiro aakaita blog yake. Zvirokwazvo, ndakadzidza zvakawanda kubva kwaari futi! Zvitambi zvake hazvioneke, futi.
Ndatenda, Zvekare! Uye kana iwe uchida chero rubatsiro - usazeze kubvunza!